Reflective Glass Zviyero Zvokugadzira - China Roadmarking Glass Zviyero Factory, Vatengesi
Kutenda kugirazi mabheji akasungirirwa mune zvekucheresa zvinhu, magirazi egirazi anoratidza mwenje wemotokari kumutyairi, achiita segirazi, izvo zvinoguma ne "light-up" mhedzisiro yekumara. Ichi chiitiko chakakosha pamwe nekuchengetedza nzira.
Girazi mabhesi chikamu chakakosha che traffic chengetedzo masisitimu. Panzvimbo pekuparadzira mwenje, mwenje unodzoserwa mumabheji, uchiubvumira kuti uratidzwe nemugwagwa unonanga kumashure wakananga kumutyairi.
Reflective girazi mabhesi anogona kusimudzira iyo retro-inoratidzira chivakwa chemugwagwa wekumaka mutsara. Kutyaira husiku, mwenje unovhenekera munzira yekumaka tambo negirazi mabheji, mwenje wemwenje unoratidzwa kumashure zvakafanana. saka mutyairi anogona kuona mugwagwa kumberi zvakajeka, uye kutyaira zvakachengeteka husiku.
Yakapetwa Magirazi eGirazi eMigwagwa yekumaka
Yakaputirwa inogona kuitwa kubva ku50um-1180um, zvichibva pane zvinodiwa nevatengi.